Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo 3 Ukala Jabtay & Odayaal Xal Uraadinaya.
Kooxda TPLF oo 3 Ukala Jabtay & Odayaal Xal Uraadinaya.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya kala qaybsanaantii kooxda TPLF oo oo gaadhay heer ay odayaal ufadhiistaa.
Sida xogta aan kuhelayno wax lahuuriyaba waxaa sifiican banaanka isu keenay kala jabkii kooxda talada wadanka Itoobiya marooqsatay ee TPLF, waxaana lasoo tabinayaa in ay ukala jabeen ugu yaraan 3 qaybood oo sidalasheegayo aad ukala fog.
Garabka ugu miisaanka culus waxaa hogaaminaya ninka jilib culusta ah ee wax ka aasaasay kooxda General Samora Yonis, waxaana garabka uu hogaaminayo kamid ah rag TPLF dhexdeeda ku cul culus sida, General Gabre Dila, Abay Woldu oo ah madaxwayne kusheega Gobolka Tigree ahna gudoomiyaha TPLF, Azeb Masfin oo ah haweenaydii udhaxday Raysalwasaarihii Hore ee bakhtiyay iyo General Kinfa Danye.
Kooxda 2aad waxaa hogaaminaya Sibahat Nega oo kamid ah aas’aasayaashii kooxda TPLF gudoomiyena usoo noqday waxaana kooxdiisa kamid ah Abay Tsahay oo isna kamid ah aas’aasayaashii ururka gudoomiyana soomaray, sidoo kale waxaa guruubkan kamid ah Getachew Asefa oo ah madaxa sirdoonka Itoobiya.
Waxaa jira qayb 3aad oo aan la ogayn garabka ay isku siyaasad dhawyihiin waxaana kamid ah Gabre Siyon Woldu Mikeal iyo Arkabe Uqubay oo iyaguna ah rag magac kudhex leh qoomiyada Tigreega.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay odayaal sitoos ah arintan usoo fara galiyeen iyagoo leh waxaan wada hadal ufuraynaa garabyada TPLF ee iska soo horjeeda waxaana odayaashaas kamid ah Pro. Efrem Yisahq, Hayle Gabre Silase, Lij Danial Jotanem iyo rag kale oo ganacsato ah.
Wadahadalkan odayaasha ayaan la ogayn in uu guulaysan doono waxaana muuqata kala qaybsanaanta kooxda oo gaadhay meel aan wax laga qaban karin iyo isla waynida koox kasta ay qabto oo zaa’id ah.
Kooxda ayaa sidan oo kale ukala jabtay sanadkii 2003 waxaana arintooda dadaal badan ugalay odayaasha beesha Tigreey, hase yeeshee hada uma muuqato wax ay odayaashu wax kaqaban karaan.